I-DG4Pros —— ifektri yekhamera ehamba phambili ye-drone oblique ehamba phambili nabakhiqizi | Imvula
Wazalelwa ukumodeliswa kwe-3D kwesakhiwo sokwakha okude
I-RIY-DG4 PROS njengamanje iyikhamera yezindiza ehamba phambili ngobuchwepheshe obugcwele kakhulu kwezobuchwepheshe emakethe.I-Double Gauβ eyakhelwe ngaphakathi kanye ne-Aspherical lens eyengeziwe, enganxephezela ukuphambuka, inyuse ubukhali, inciphise ukuhlakazeka futhi ilawule ngokuqinile izinga lokuhlanekezelwa ngaphansi kuka 0.4%.
Ingabekwa kuma-drones angamaphiko angaguquki nakuma-rotor amaningi, futhi ngenxa yokuthi ubude obugxile bude ngokwanele, kuzophepha ukundiza ngisho nasezindaweni ezakha kakhulu. ukuhlola, ngakho-ke izithombe ezithathwe yi-DG4Pros q zihle kakhulu, futhi imodeli ye-3D esekelwe kulezi zithombe nayo ingokoqobo njengezwe langempela.
Isikhathi esincane sokuvezwa kwesikhathi ≤0.6s, okusho ukuthi noma ngabe ibekwe ku-drone enamaphiko angaguquki, ingaqedelela ukutholwa kwedatha ngenkathi i-drone indiza ngejubane elikhulu.
Yini ifomethi yolwazi oluhlaza? Ngifanele ngicubungule kanjani ngalo?
ifomethi yezithombe eziluhlaza yi-.jpg.
Imvamisa ngemuva kokundiza, okokuqala sidinga ukuzilanda zisuka kukhamera, ezidinga isoftware esiyiklanyile i- “Sky-Scanner”. Ngale software, singalanda idatha ngokhiye owodwa, bese sakha amafayela we-ContextCapture block nawo.
Xhumana nathi ukwazi kabanzi ngezithombe ezingavuthiwe>
Inqubo yokufaka kuzingxenyekazi ezahlukahlukene kungaba i-UAV wing ephikisiwe noma izindiza ezincane?
I-RIY-DG4 PROS ingabekwa kuma-drones ama-multi-rotor ne-wing-wing wokutholwa kwedatha ye-oblique.Ngenxa yophiko lokulawula, iyunithi lokudlulisa idatha namanye ama-subsystems ahlelekile, ngakho-ke kulula ukufakwa nokufakwa esikhundleni. nezinkampani eziningi ze-drone emhlabeni jikelele, zombili ezinamaphiko angaguquki nama-multi-rotor kanye ne-VTOL ne-helicopter, kuvela ukuthi zonke zishintshwe kahle kakhulu.
Kungani ukuvumelanisa kwama-lens amahlanu kubaluleke kangaka?
Sonke siyazi ukuthi ngesikhathi sendiza ye-drone, kuzonikezwa isibonakaliso se-trigger kumalensi amahlanu ekhamera ye-obique. Ngokomqondo, amalensi amahlanu kufanele adalulwe ngokulandelana, bese idatha ye-POS izorekhodwa ngasikhathi sinye.
Kepha ngemuva kokuqinisekiswa kwangempela, sifike esiphethweni: lapho ulwazi luyinkimbinkimbi ngokwengeziwe endaweni yesehlakalo, kukhula inani lemininingwane i-lens engalixazulula, icindezele, futhi ligcine, nesikhathi esithatha ukuqedela ukurekhoda.
Uma isikhawu esiphakathi kwezimpawu zesibambi sifushane kunesikhathi esidingekayo sokuba ilensi iqedele ukuqopha, ikhamera ngeke ikwazi ukuveza okuzoholela "esithombeni esilahlekile".
BTW，i ukuvumelanisa nakho kubaluleke kakhulu kusiginali ye-PPK.
Kuyini ukusebenza kahle kwe-DG4Pros? Ngiwabeka kanjani amapharamitha afanele?
I-DJI M600Pro + DG4Buhle
Isivinini sendiza （m / s）
Indawo eyodwa yokuhamba ngendiza （km2）
Inombolo yesithombe sendiza eyodwa
Inombolo yosuku lwendiza
Indawo yokusebenza yonke Ngolunye usuku （km2）
Table Ithebula lepharamitha libalwa ngesilinganiso sokugqagqana kwe-longitudinal esingu-80% kanye nesilinganiso esinqwabelanayo esinqwabelanayo esingu-70% （sincoma ukuthi
I-drone enamaphiko aqondile + DG4Buhle
indawo yokusebenza （km2）
Ngolunye usuku （km2）
Xhumana nathi ukuthola ukhiye>
Icala lempumelelo lokuthwebula izithombe nge-oblique
—Sebenzisa imodeli ye-3D ukwenza ucwaningo lwe-cadastral ezindaweni eziphakeme kakhulu
1. Ukubuka konke
Ngemuva kweminyaka eminingana yentuthuko, manje eseChina, ukuthwebula izithombe kwe-oblique kuye kwasetshenziswa kabanzi kumaphrojekthi wokuhlola asezindaweni zasemakhaya. Kodwa-ke, ngenxa yokuvinjelwa kwemibandela yezobuchwepheshe bemishini, izithombe ze-oblique zisabuthakathaka ekulinganisweni kwe-cadastral kwezigcawu ezinkulu, ikakhulukazi ngoba ubude begama kanye nefomethi yesithombe selensi yekhamera ye-oblique ayikho ezingeni elifanele. Ngemuva kweminyaka eminingi yesipiliyoni sephrojekthi, sithole ukuthi ukunemba kwemephu kufanele kube phakathi kuka-5 cm, khona-ke i-GSD kumele ibe phakathi kuka-2 cm, futhi imodeli ye-3D kufanele ibe yinhle kakhulu, emaphethelweni esakhiwo kufanele aqonde futhi acace.
Ngokuvamile, ubude obugxile kwikhamera obusetshenziselwa amaphrojekthi wokulinganisa asezindaweni zasemakhaya ngu-25mm ngokuma mpo no-35mm oblique. Ukuze kuzuzwe ukunemba kwe-1: 500, i-GSD kumele ibe ngaphakathi kuka-2 cm. Futhi ukuqinisekisa ukuthi, ukuphakama kwendiza kwama-drones ngokuvamile kuphakathi kuka-70m-100m. Ngokwalokhu ukuphakama kwendiza, ayikho indlela yokuqedela ukuqoqwa kwedatha yezakhiwo eziyi-100m-ngenhla.Ngisho noma wenza indiza noma kunjalo, ayikwazi ukuqinisekisa ukugqagqana kophahla, okuholela ezingeni elibi lemodeli Futhi ngoba ubude bokulwa buphansi kakhulu, kuyingozi enkulu kwi-UAV.
Ukuze sixazulule le nkinga, ngoMeyi 2019, senze isivivinyo sokuqinisekisa ukunemba kwe-Oblique Photography yezakhiwo eziphakeme ezisemadolobheni. Inhloso yalolu vivinyo ukuqinisekisa ukuthi ukunemba kokugcina kwemephu yemodeli ye-3D eyakhiwe yi-RIY-DG4pros oblique camera kungahlangabezana nemfuneko ye-5 cm RMSE.
2. Inqubo yokuhlola
Kulesi sivivinyo, sikhetha i-DJI M600PRO, ifakwe iRainpoo RIY-DG4pros oblique enamalensi amahlanu.
Ukuhlola indawo nokuhlela amaphuzu wokulawula
Ukuphendula izinkinga ezingenhla, nokwandisa ubunzima, sikhethe ngokukhethekile amaseli amabili anobude obuphakathi kwesakhiwo obungamamitha ayi-100 ukuze ahlolwe.
Amaphoyinti okulawula ahlelwe kabusha ngokuya ngemephu ye-GOOGLE, futhi imvelo ezungezile kufanele ivuleke futhi ingavinjelwa ngangokunokwenzeka. Ibanga phakathi kwamaphoyinti likububanzi obungu-150-200M.
Iphoyinti lokulawula liyisikwele esingu-80 * 80, lihlukaniswe laba bomvu futhi liphuzi ngokuya ngokwe-diagonal, ukuze kuqinisekiswe ukuthi isikhungo sephoyinti singabonakala kahle lapho isibonakaliso sinamandla kakhulu noma ukukhanya kunganele, ukwenza ngcono ukunemba.
Ukuhlelwa Kwemizila ye-UAV
Ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kokusebenza, sigcine indawo ephakeme engamamitha angama-60, kanti i-UAV yandiza ngamamitha ayi-160. Ukuqinisekisa ukugqagqana kophahla, siphinde sakhuphula izinga lokugqagqana. Izinga lokugqagqana kwe-longitudinal lingu-85% kanti izinga lokugqagqana lokugqagqana liyi-80%, kanti i-UAV yandiza ngejubane le-9.8m / s.
Umbiko we-Aerial Triangulation (AT)
Sebenzisa isoftware ye- “Sky-Scanner” (Ethuthukiswe yiRainpoo) ukulanda nokucubungula izithombe zokuqala, bese uzingenisa kwisoftware yeContextCapture 3D ngokhiye owodwa.
Umbiko wokuhlanekezela ilensi
Kusukela kumdwebo wegridi yokuhlanekezela, kungabonakala ukuthi ukuphazamiseka kwelensi kwe-RIY-DG4pros kuncane kakhulu, futhi ukuzungeza kucishe kuqondane ngokuphelele nesikwele esijwayelekile;
Iphutha lokukhishwa kabusha i-RMS
Ngenxa yobuchwepheshe be-optical yeRainpoo, singakwazi ukulawula inani le-RMS ngaphakathi kuka-0.55, okuyipharamitha ebalulekile ekunembeni kwemodeli ye-3D.
Ukuvumelanisa kwama-lens amahlanu
Kungabonakala ukuthi ibanga eliphakathi kwephoyinti eliyinhloko lelensi eme mpo nephuzu eliyinhloko lamalensi e-oblique yilezi: 1.63cm, 4.02cm, 4.68cm, 7.99cm, kususa umehluko wesikhundla sangempela, amanani amaphutha yilena: - I-4.37cm, -1.98cm, -1.32cm, 1.99cm, umehluko omkhulu wesikhundla ngu-4.37cm, ukuvumelanisa kwekhamera kungalawulwa kungakapheli ama-5ms;
I-RMS yamaphoyinti wokulawula abikezelwe futhi angempela asukela kumaphikseli we-0.12 kuye ku-0.47.
3. 3D ukumodela
Siyabona ukuthi ngoba i-RIY-DG4pros isebenzisa amalensi obude obude, indlu engezansi kwemodeli engu-3d icace bha. Isikhathi esincane sokuvezwa kwekhamera singafinyelela kuma-0.6s, ngakho-ke noma ngabe isilinganiso esigudlanayo se-longitudinal sinyuswe safinyelela kuma-85%, akukho ukuvuza kwesithombe okwenzekayo. Imizila yezakhiwo eziphakeme icace bha futhi iqonde ngokuyisisekelo, okuqinisekisa nokuthi singathola imikhondo enembile kwimodeli ngokuhamba kwesikhathi.
4. Ukunemba Isheke
Sisebenzisa isiteshi esiphelele ukuqoqa idatha yesikhundla samaphoyinti wokuhlola bese singenisa ifayela le-DAT ku-CAD. Bese uqhathanisa ngqo imininingwane yokuma kwamaphoyinti kwimodeli ukubona umehluko wazo.
Kulesi sivivinyo, ubunzima ukuthi ukwehla okuphezulu nokuphansi kwendawo yesehlakalo, ukuminyana kwendlu kanye naphansi okuyinkimbinkimbi. Lezi zinto zizoholela ekwandeni kobunzima bokundiza, ubungozi obukhulu, kanye nemodeli embi kakhulu ye-3D, okuzoholela ekwehleni kokunemba kunhlolovo ye-cadastral.
Ngoba ubude be-RIY-DG4pros bude kunamakhamera ajwayelekile we-oblique, kuqinisekisa ukuthi i-UAV yethu ingandiza endaweni ephephile ngokwanele, nokuthi ukulungiswa kwesithombe sezinto ezisemhlabathini kungaphakathi kuka-2 cm. Ngasikhathi sinye, ilensi efreyimu ephelele ingasisiza ukuthi sithwebule ama-engeli amaningi ezindlu lapho zindiza ezindaweni zokwakha ezixinene kakhulu, ngaleyo ndlela zithuthukise ikhwalithi yemodeli ye-3D. Ngaphansi kwesisekelo sokuthi wonke amadivayisi wehadiwe aqinisekisiwe, siphinde sithuthukise ukugqagqana kwezindiza nobuningi bokusabalalisa kwamaphoyinti okulawula ukuqinisekisa ukunemba kwemodeli ye-3D.
izithombe ze-oblique zezindawo eziphakeme kakhulu zenhlolovo ye-cadastral, kanye ngenxa yemikhawulo yemishini nokuntula ulwazi, kungalinganiswa kuphela ngezindlela zendabuko. Kepha ithonya lezakhiwo eziphakeme kwisignali ye-RTK futhi libangela ubunzima nokunganemba kahle kwesilinganiso. Uma singasebenzisa i-UAV ukuqoqa idatha, umthelela wezimpawu zesathelayithi ungasuswa ngokuphelele, futhi ukunemba okuphelele kwesilinganiso kungathuthukiswa kakhulu. Ngakho-ke impumelelo yalolu vivinyo ibaluleke kakhulu kithi.
Lokhu kuhlolwa kufakazela ukuthi i-RIY-DG4pros ingayilawula ngempela i-RMS ebangeni elincane, inokunemba okuhle kwe-3D, futhi ingasetshenziswa kumaphrojekthi wokulinganisa anembile wezakhiwo eziphakeme.
Usayizi wekhamera 190 * 170 * 80mm
Isisindo sekhamera 850g
Usayizi wezinzwa 23.5 * 15.6mm
Inani lamaphikseli (Ingqikithi) 20120mp
Isikhathi esincane sokuvezwa ≤1s
Imodi yokuvezwa kwekhamera Ukuvezwa kwe-Isochronic / Isometric
Imodi yokunikezwa kwamandla kwekhamera Ukunikezwa kwamandla okuhlanganisiwe
Ukuqhubekiswa kwedatha I-SKYSCANNER (GPS)
Umthamo wememori 320g
Ijubane lokukopisha idatha ≥70m / s
Ukushisa okusebenzayo -10 ℃ ~ 40 ℃